News Archives - SAMACHAR SANJAL
एमाले–माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दै, पार्टी एकताबारे ठोस निर्णय हुने नेताहरुको दाबी
February 9, 2018 admin>
काठमाडौँ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक आज बोलाइएको छ । पार्टी एकता प्रक्रिया संकटमा परेको आशंका हुन थालेका बेला समितिको बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा सरकार गठन, पदीय भागवण्डा लगायत पार्टी एकताका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । यसअघि हिजो एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको एक्ला–एक्लैको भेटवार्तामा भएका छलफलका बारेमा समेत समितिमा जानकारी गराइने बताइएको छ । सरकार गठनको पदीय भागवण्डामा सहमति जुटाएका दुई दल पार्टी एकतामा भने समस्यामा परेका छन् । अध्यक्ष माओवादीलाई दिने वा नदिने भन्नेमा…
माछा समात्न जाँदा अचानक आयो गोही, त्यसपछि के भयो ? (भिडियो)
अस्ट्रेलियामा रहँद आएका एक युवकसँग एउटा अनौठो घटना भएको छ । एकजना युवा माछा पक्रिन नदीमा गएका थिए । तर, त्यहाँ जे भयो त्यसले तपाईँलाई पनि तर्साउन सक्छ । युवक नदीमा माछा समात्ने कोशिमा जुटेका थिए । त्यही बेला त्यहाँ एउटा विशाल गोही आइपुग्यो । गोही तीब्र गतिमा आएपछि युवकले मुस्किलले भागेर ज्यान बचाए । गोहीले माछालाई पछ्याउँदै आफ्नो शिकार बनाइछाड्यो । अचानक भएको यो घटनाले ती युवा बेहोस जस्तै भए । यस घटनाको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । यस भिडियोमा एक युवक माछा समात्ने कोशिशमा लागेको…
प्रचण्डले खोले वाम गठबन्धन हुन् नसक्नुको खास कारण!को हुन् बाधा ?
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताका विरुद्ध एमाले र माओवादीकै नेता र शक्तिलाई उचाल्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ । शनिबार दिउँसो एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको आठौं चितवन जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘जनताले पार्टी एकतालाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । हामीसँग एकताको कुनै बिकल्प छैन । तर, यस बीचमा पार्टी एकताको प्रयासमा मैले निकै ठूला चूनौतिको सामना गरें । एउटा शक्तिले बाम गठबन्धन भत्काउन मलाई पाँच वर्षकै प्रधानमन्त्री दिने प्रस्ताव गर्यो, मैले त्यसलाई ईन्कार गरें, फेरि त्यो शक्ति एकता भत्काउन अर्कोतिर लागेको छ ।…
हामीले तिम्रो सिमा बचाउने तिमी हाम्रो सिमा मिच्ने ? सिङ्गो भारतलाई हल्लाउने चेतावनी दिए गोर्खाली सेनाले !
सीमा स्तम्भ मर्मतका क्रममा नेपालको लगभग ५० बिगाहा जमिन भारतले कब्जा गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नापी विभागको एक टोली वीरगञ्ज पुगेको छ ।पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले दिएको जानकारी अनुसार नापी विभागका निर्देशक अनिल मरासिनी नेतृत्वको टोली मिचिएको सीमाको सत्य–तथ्य बुझ्न वीरगञ्ज पुगेको हो । प्राविधिक रुपमा नक्सांकन मिले/नमिलेको अध्ययन गर्नकै लागि नापी विभागका निर्देशकसहितको टोली वीरगञ्ज आइपुगेको उनले बताए । काठमाडौं– वीरगंजस्थित नेपाल–भारत सीमामा पर्ने छपकैयामा ५० विगाहा जमिन भारतीय पक्षले मिचेको भन्दै सरकारविरुद्ध काठमाडौंमा प्रर्दशन गरिएको छ ।नेपालीहरुको नाममा रहेको करीब ५० बिघा जमिन भारत तर्फ पर्ने…
News देश समाचार
एउटा अनौठो बच्चा जन्मियो वीरगन्जमा नाक छैन, आँखा एउटा मात्रै
नेपाली इन्सटेन्ट नीउज बुधबार, काठमाडौँ, वीरगञ्जमा एक महिलाले अनौठो बच्चालाई जन्म दिएकी छन् । वीरगन्ज हेल्थ कियरको इमरजेन्सीमा प्रसूूति गराउन भर्ना भएकी रौतहटकी एक महिलाले सोमबार नाक नभएको, आँखा एउटा मात्रै भएको तर राम्रोसँग विकास नभएको अनौठो बच्चा जन्माएकी हुन् । शिशुुको हातखुट्टा र शरीर भने ठिक थियो । उनलाई रौतहटबाट रिफर गरेर त्यहाँ लगिएको थियो । ती गर्भवती महिला पाठेघरको मुखमा बच्चाको सालले छोपिएको र रगत बगिरहेको अवस्थामा हेल्थ कियरमा आइपुुगेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा.रमोला साहले बताइन् । प्रसूति गराउन आएकी ती महिलाको पाठेघरको मुखमा बच्चा नभेटिएर सालमात्रै भेटिएको…
News अनौठो समाचार
प्रधानमन्त्री देउवाले भने-एक इन्च नेपाली भूमि भारतलाई छोड्दिन !!!!
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक इन्च नेपाली भूमि भारतलाई नछोड्ने बताएका छन् । पर्साको छपकैयामा सीमा मिचिएको बारे ध्यानाककर्षण गराउन पुगेको विद्यार्थीहरुको टोलीहरुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो जवाफ दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव उत्तम अधिकारीले भने,’हामीले स्थलगत अवलोकोन पश्चात सुझावसहित तयार पारेको प्रतिवेदन बुझायौं, प्रधानमन्त्रीले एक वाक्यमा ; म एक इन्च नेपाली भूमि भारतलाई छोड्दिन्न भन्नुभयो ।’ आफूहरुले प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सिमानामा काँडेतार लगाउन सुझाव दिएको महासचिव अधिकारीले जानकारी दिए । अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियुका अध्यक्षद्वय रंजित तामाङ र नविना लामा नेतृत्वको संयुक्त टोली केही दिन…
परम्परागत शैलीमा नै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्न विशेषज्ञ समितिको सुझाव
January 21, 2018 editor>
KANTIPUR DIARY राष्ट्रिय परम्परागत शैलीमा नै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्न विशेषज्ञ समितिको सुझाव 74 Shares काठमाडौं माघ ७, २०७४– रानीपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा उत्पन्न भएको विवाद पछि गठित समितिले काठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य समक्ष अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको छ । पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक विष्णुराज कार्की संयोजकत्वको विशेषज्ञ समितिले शाक्यलाई प्रतिवेदन पेश गरेको हो । समितिले रानीपोखरी परम्परागत शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पुरानो दक्षता, प्रविधि र स्वरुपको निरन्तरता हुने र मौलिकता कायम भएकाले प्रताप मल्लकालिन पोखरीको सतह निर्माण प्रविधि, गाह्रोको शैली, मौलिक सामाग्रीको प्रयोग गनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ…
January 19, 2018 January 19, 2018 editor>
तनहुँ । बाघको छाला र हड्डी सहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राजमार्गमा गुडिरहेको एउटा गाडीप्रति संका लाग्दा चेकजाँच गर्ने क्रममा बाघको छाला र हड्डी सहित दुई जनालाई पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको हो । सुरक्षमा खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले काठमाडौंबाट पृथ्वी राजमार्गहुँदै पोखरातर्फ जाँदै गरेको बा. १५ च ७४५६ नम्बरको स्कारपियो गाडीलाई खानतलासी गर्दा बाघको छाला ३ थान, बाघको हड्डी ५ केजी ५ सय ५० ग्राम सहित दुई जनालई समाउन सफल भएको हो । आबुखैरेनी गाउँपालिका–४ पुलजिपस्थित पृथ्वी राजमार्गबाट नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका बस्ने २८ वर्षीय भिमबहादुर तामाङ…
काठमाडौं। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो विरोध गर्ने केन्द्रीय सदस्यको बोल्ने पालो खोस्दै अर्का केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न दिएका छन् । आफ्नो बोल्ने पालोमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरु मण्डले भएको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापतिमाथि नै शंका छ भनेपछि देउवाले गुरुङलाई रोक्दै विमलेन्द्र निधिलाई बोल्न समय दिए । निधि देउवाका विश्वासपात्र मानिन्छन् । बैठकमा आफ्नो आलोचना हुने देखेपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवाले चुनावको समीक्षा अर्कौ बैठकले गर्ने भन्दै अहिलेको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा मात्र केन्द्रित हुन आग्रह…
जन्मजातै क्याल्सियमको कमी भएकाले नविना खनालको गोडाको हड्डी भाँच्चिएर धूलो भएको रहेछ । पाल्पाबाट राजधानी फर्कने क्रममा तनहुँको दमौलीछेउको एउटा दृश्यले ध्यान खिच्यो तर फोटो खिचिनँ । झन्डै एक किलोमिटर बढेपछि मन मानेन । आखिर को थिए ह्विलचेयरमा बस्ने र ठेल्ने बालबालिका ? अनि, फनक्कै फर्किएँ । राजमार्ग किनारमै रहेछन्, उनीहरु । तस्बिर खिचेँ र गफ गर्न खोजेँ । तर, तीनै जना नि:शब्द रहे । बाबुआमाको फोन नम्बर मागेँ । तीमध्ये केटोले अँध्यारो मुख लगाउँदै नजिकैको पसलतिर इसारा गर्‍यो । पसले उनका मामा रहेछन् । उनै कृष्णराज खनालसँगको भेटपछि उनीहरुबारे…
News दुखद समाचार